9 amaqiniso ngesahlukaniso, okuyilona elidingekayo ukuze ukwazi umbhangqwana ngamunye umshado
Ubudlelwane, Ukudabuka of ubudlelwano
Emazweni amaningi, izibalo zesehlukaniso Kancani-kancani ikhula. Ngokwesibonelo, e-Russia mayelana nemishado isigamu iba yingxenye yomhlabathi. Ngisho noma lo mbhangqwana afunge ukuba ndawonye "size sihlukaniswe ukufa kithi ingxenye," kukhona ithuba 50 amaphesenti ukuthi bayoba ukuwuchitha. Ngemva ukutadishwa izibalo zesehlukaniso, zezenhlalo ziye zafika eziphethweni ezithakazelisayo. Yini okufanele ukwenze ukuze kungabi phezu "obubi"?
Marry iminyaka eduze 30
Ngo abasanda kushada ukwenza bakhethe ngokolwazi, kukhona yithuba elihle yokwakha umkhaya oqinile. Ngokwezibalo, okungenani azo zonke izehlukaniso ibhaliswe uma abantu washada eduze unyaka wayo wamashumi amathathu. Uma umbhangqwana wayengekho ngisho amabili, khona-ke kukhona kuqala kulayini ukuze ezingaba uqhekeko. Odokotela bengqondo ukuchaza lokhu kanje: nesifiso esinamandla ukushada kungase kungabi kuyisihluthulelo sokuba nobuhlobo enempilo. Omunye isifiso, uthando noma uthando kukhona ngokucacile akwanele. Ngakolunye uhlangothi, uma iminyaka umbhangqwana ezingaphezu kuka-32, kukhona ingozi ukuthi umbhangqwana Niyokuhlakaza ngenxa kwenqatshwa acute obuku imikhuba umlingani.
Musa ukuthatha iholidi ngokuhlanganyela efana ukususa inkinga
Ngemva kokuhlaziya Ukuvutha umsebenzi abafisa ukuba ahlukanise, ochwepheshe bathole enye ethakazelisayo. It kuvela ukuthi isifiso ukuyeka ubudlelwano abantu bavame sengibuyile iholide. Uma abangane bomshado lukhona ezinye izinkinga emshadweni, bona dream of a iholide wachitha ndawonye kulo ngenkolelo yokuthi lelo ingaqinisa ubuhlobo. Nokho, spats izingxabano musa zinyamalale ngisho imvelo romantic lezingu eningizimu. Kuba nesimo esidumazayo okukhulu. Yingakho, ngemva kokubuya ekhaya iholidi, omunye abalingani uzolunga ukusebenzisa isahlukaniso.
Amadoda kufanele abe matasa
Uma umngane womshado uhlala ekhaya noma imisebenzi uyinqaba, uthola ukukhungatheka isimo sabo emndenini. Kumzwisa ubuhlungu ukuziqhenya amadoda, siqiniseka ukuthi kufanele kube Umholi main. Ngokwezibalo, umlingani, hhayi isikhathi esigcwele emsebenzini wokuziphilisa, ematfuba isehlukaniso ngonyaka ozayo lingaphezulu lapho beqhathaniswa nalabo ababefundiswe abasebenza amahora okungenani 40 ngesonto. Okuxakayo ukuthi la umsebenzi zesifazane akuphazamisi iphesenti abahlukanisayo. Lokhu kungenxa yokuthi abesifazane zijwayele ukucabanga wayezibona ngumalusi le futhi ungangabazi ukumemezela kwabanye ukuthi uhleli ekhaya. It kuvela ukuthi eyeqisayo wawobaba iphile ezingqondweni zabantu kuze kube manje.
Empeleni, abesifazane abaye baba ngaphambi komshado ubulili nabantu abaningi, aniqhubeki "ukuzidela" zabo emshadweni. Kuyinto inganekwane kusungulwe abantu abangekho sizimisele ukubekezelela neqiniso lokuthi intombazane ayisaxhunyanisiwe ukugcina ubuntombi bakhe ngaphambi komshado. Abameleli beNdikimba isigamu enhle lwesintu kalula sizakhele, ukukhetha umngane wokuphila ehloniphekile. Ngokuvamile uholwe zwi "kusukela esenzweni esihle uya abajeziswa."
Nokho, kungaphumeleli olubhekiswe kwabesifazane ngubani, ngenxa ezinye izici bokuphila noma ngokwengqondo abakwazi ukwaneliseka ubuhlobo engaguquki nomunye uzakwethu. Izibalo basho lokhu okulandelayo: 'Uma owesifazane oshadile, umyeni wakhe ukukopela wakhe, waba nethuba elingcono ukuba afuna isehlukaniso. Uma sikhuluma ngokukhethekile, izintombi oshadile, bavame ogibeni ngenxa yelukuluku sakhe. isifiso omningi ukuqhathanisa ucansi unkosikazi nenye indoda.
imibhangqwana evuthiwe ukuphula kancane kaningi
Lapho bonke nezikhathi ezibucayi ngomshado ngemuva, kulula sibekezelele imikhuba kothandekayo, kuba lula ukuvala amehlo akho ukuba amaphutha akhe futhi kulula ukuthethelela. Abantu abavuthiwe ngiye ngazuza isipiliyoni kakhulu. Lapho ku namanabukeni esidlule, ngokuxabana yasendlini futhi ethi awafike nemikhaya entsha, abantu kungenzeka kakhulu ukugcina umshado size siguge. Odokotela bengqondo ukholelwa ukuthi esizoqala kuso ukubala crisis lokho okubizwa ngomlobokazi ubudlelwane eneminyaka eyisikhombisa. Uma okwamanje umbhangqwana kudala usesimweni umndeni uhlala ngenxa izingane, alinaso esizayo. Uma abangane bomshado ukuphatha uwele leli Rubicon ngokuphepha, azisekho sokwesaba noma sibhekana nobunzima.
Marry beshada ontanga
Olunye ucwaningo lwathola ukuthi amathuba isehlukaniso kwandisa ngokulingana ngqo umehluko yobudala phakathi kwabashadile. Minyaka yonke ehlukanisa engu-abalingani komunye nomunye, okwandisa amathuba zesehlukaniso amaphesenti amathathu. A iminyaka eyishumi ngobudala kwandisa amathuba okuthi ukuhlukaniswa by cishe amaphesenti angu-40. Kubonakala ukuthi konke okunengqondo. Ontanga uma ukusika indwangu efanayo. Bavame sabelane nabanye imibono nezimiso ukuphila, babe izithakazelo ezifanayo.
Ungenzi celebration grand
Njengoba umkhuba ubonisa, umshado acebile futhi abaqhoshayo okwengeziwe, kulapho cishe ukudabuka of ubudlelwano. Ngakho-ke, musa ukubabela ongasichitha ku idili esabelweni sezimali sonyaka, ungazami ukubamangaza izethameli ngokuthile noma nje imbangi esisobala wangaphambili. Chitha imali ku kukankosikazi romantic noma uwafake Reserve. Ngokwezazi zokuhlalisana kwabantu, 'akafikanga nokubukisa ngokweqile kubonisa ukuthi lo mbhangqwana cishe ngeke bakwazi ukuphatha kahle izimali zabo. Futhi ngenxa yalesi simo banayo umehluko. Kodwa inani elikhulu abamenyiwe, ngakolunye uhlangothi, okunamandla kubonisa amandla Ubuhlobo.
Isehlukaniso nomthelela empilweni inhliziyo
Ucwaningo lwamuva esibonisa ukuthi abesifazane abaye babhekana isehlukaniso, maningi amathuba okuthi uhlushwa isifo senhliziyo. Lolu lwazi kuyoba kubalulekile amadoda ezinakekelayo impilo neengcezu yabo yesibili. Ukuze abesifazane abaye babhekana inqubo yesehlukaniso izikhathi ezimbili noma ngaphezulu, okwandisa ingozi yokuba nesifo senhliziyo ngamaphesenti angu-77.
Izingane ngeke siyabonga lomhlatshelo wakho
Imibhangqwana eminingi yokuphila kuleli esihogweni, ukugcina ukubukeka ubudlelwane ngenxa izingane. Eqinisweni, isisulu akusho bathethelele uqobo. Lapho indodana noma indodakazi zikhula, ngeke abonge abazali, futhi umshado namanje liphuke. Khumbula ukuthi ubudlelwane imodeli emshadweni kulindeleke ungene izingane zakho. Uma ungajabule ngokujulile, aba maningi amathuba okuba ukuthatha wena "baton".
Amathiphu amantombazane: indlela thunga abafana amahle
Amadoda 3, bayazivikela abangane abakhulu.
I izingcaphuno best mayelana nokuhlala ngokwehlukana. Amagama elingakwazi ukuvula amehlo akho ubuhlungu
Uthando unrequited, yini okufanele uyenze?
Inethiwekhi Walmart: kuyini? Umlando, izici, amasevisi
Ukulungiselela Dermaprotektorny "Differin": Yokusetshenziswa
"Kuyaxaka," idrama ubugebengu. Abalingisi arthouse mfanekiso